पाेखरा २९ कात्तिक- बलिउड चर्चित नायिका वाणी कपुर अभिनित चलचित्र ‘वार’ले बक्स अफिसमा धमाका मच्चायो । तर, यो चलचित्रको सफलताले वाणीलाई भने खासै फाइदा भएको छैन । बरु, हालै मात्र उनी एक पहिरनका कारण विवादमा फसेकी छिन् । वाणीले आधा क्लिभेज देखिने गरि लगाएको एक पहिरनले विवाद निम्त्याएको हो ।
उनले लगाएको ब्लाउज विवादमा पर्नुको कारण, त्यसमा लेखिएको अक्षर हो । उनले ‘राम’ लेखिएको ब्लाउज लगाएकी थिइन् । उनको पहिरनले हिन्दु धर्माबलम्बीहरुको भावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै चर्को आलोचना भैरहेको छ ।
हुन त, वाणीले यो तस्वीर आफ्नो इन्स्टाग्रामबाट हटाएकी छिन् । तर, याे सामाजिक संजालको दुनियाँमा यो तस्वीर भाइरल भैरहेको छ । कतिपयले वाणीले हिन्दुहरुको भावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै उनलाई प्रतिवन्ध लगाउन समेत अपिल गरेका छन् । वाणीले ‘लाज पचाउँदै’ यस्तो पहिरन लगाएको भन्दै उनको चर्को विरोध गर्नेहरु पनि सामाजिक संजालमा देखिएका छन् ।
शुक्रबार बेलुकी राष्ट्रपति भवन शित्तल निवासमा आयोजना भएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’मा नायिका बेनिशा हमालले चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’बाट वि.सं २०७४ सालको उत्कृष्ट नायिकाको पुरस्कार जित्दै गर्दा चलचित्र ‘बुलबुल’बाट नायिका स्वस्तिमा खड्काले वि.सं २०७५ सालको उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड जितिन् । एकैसाथ ३ बर्षको अवार्ड वितरण गरिएको सो समारोह केही विवादस्पद र केही रोचक देखिएको थियो । अवार्ड जितिसकेपछि नायिका बेनिशा हमाल र स्वस्तिमा खड्काले अनलाइनखबरसँग छोटो कुराकानी गरेका छन्ः
बेनिशाः एकदमै खुशी लागिरहेको छ । कुनै पनि कलाकारले राष्ट्रिय अवार्ड जित्दा गर्व महशुश भएको छ । ‘राष्ट्रिय अवार्ड जितेको कलाकार’ भनेर ट्याग पाउँदा खुशी लाग्छ । बल्ल मलाई चलचित्र क्षेत्रमा आएको सार्थक भएजस्तो लागिरहेको छ । स्वस्तिमाः राष्ट्रिय अवार्डको आफैमा महत्व हुन्छ, एकदमै खुशी लागेको छ ।
बेनिशाः चलचित्र गर्दा त अवार्डका लागि भन्दा पनि आफ्नो कामलाई न्याय दिन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर बढी केन्द्रित भइन्छ । चलचित्र रिलिज भएपछि दर्शकको प्रतिक्रिया र समिक्षाको आशा बढी हुन्छ । स्वस्तिमाः मैले पनि अवार्ड नै पाउँछु भनेर काम गरेकी त होइनँ । काम गर्दा अवार्डतिर ध्यान जाँदैन । अवार्ड आयोजनाको समय आउँदा भने, हाम्रो चलचित्रले अवार्ड पाउला कि नपाउला भन्ने लाग्छ ।
४. ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’ प्राप्त गरेपछि जिम्मेवारी कती बढ्यो भन्ने लाग्छ ? स्वस्तिमाः धेरै जिम्मेवारी बढेको छ जस्तो लाग्छ । अब, ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । आफूले पहिले गरेको भन्दा अझै बढी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । पहिले सत प्रतिशत दिएको थिएँ भने अब २ सय प्रतिशत दिनुपर्छ ।
५. लगातार २ वटा चर्चित पुरस्कार पाउँदा, अब कस्तो खालको फिल्म खेल्नु पर्छ भन्ने लागेको छ, स्वस्तिमाजीलाई ? स्वस्तिमाः मेरो चयनमा जहिले पनि दुबै खालको चलचित्र हुन्छ । अवार्ड पाउने खालकै चलचित्र मात्रै गर्छु भन्ने पनि छैन । कमर्सियल र आर्ट मुभी दुबै गर्नुपर्छ ।
६. श्रीलंकामा अवार्ड जित्नुभयो, नेपालमा ‘राष्ट्रिय पुरस्कार’ पाउनुभयो । कुन पुरस्कारमा बढी गर्व महशुश भयो ? स्वस्तिमाः राष्ट्रिय अवार्ड पाएको नायिका भन्दा अर्कै हुन्छ । ‘सार्क फिल्म फेस्टिभल’मा अवार्ड पाएकी नायिका भन्दा पनि अर्कै हुन्छ । यसमा कुनै पनि खालको तुलना हुँदैन । दुबैमा फरक महशुश हुन्छ ।